မေးခွန်း တစ်ခုတည်းသောစစ်ရေး Video
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #433 by Colonelwing
ကောင်းသောနေ့က Gentelmen ,, တစ်ဦးထိုင်ခုံရှိသည်!
ငါစစ်ရေးဗီဒီယိုသာလျှင်အသုံးပြုရန်ဒီ TOPIC အားဖိုရမ်ကိုအသုံးပြုပြီးပါလိမ့်မည် ...
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #434 by Colonelwing
ကောင်းသောနေ့ Gentelmen ,,
သူတော်ကောင်းအမည် Dave Groark နှင့်အတူစတင်ကြစို့ ...
Dave Groark ကို Lockheed F-104 Starfighter ၏အသေးစိတ် walkaround ပေးသည်။ Dave လည်းသူနှင့် F-104 နှင့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုပျံသည်သူ၏မိတ်ဆွေများကအကြောင်းကိုအများအပြားပုံပြင်များဝေမျှပေးသည်။ ဤသည် Tyler တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိသမိုင်းဝင်လေကြောင်းသတိရအောက်မေ့ပြတိုက်မှာရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
တချို့ရိုသေလေးစားမှုရှိသည်နှင့်တစ်ဦးထိုင်ခုံရှိသည်နှင့်လူကိုပြောနေ & သင့်အကြောင်းပြောပြဘယ်အရာကိုလိုကျနာ ...
အက်ဖ် -104 Walkaround ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးနောက်ပြကွက်များနောက်ကွယ်တွင်
အိုး ,, သင်တို့ရှိသမျှသည်ဤနေရာတွင်အပေါ်ကောင်းသောယောက်ျားလေးများဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အကြောင်းမရှိ ,, ငါသည်သင်တို့ကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ VETs အားလေးစားမှုအဘို့ ,, သင်တစ်ဦးအသေးအပိုဆုတယ်။
မိမိအလေယာဉ်တင် (တက်နီးပါး 10 မိုင်) 1963 ခြေရင်းနားမှာထိန်းချုပ်မှု ထွက်. ပျက်ကျခဲ့သည့်အခါ "ဒီဇင်ဘာလ 104, 108,700 တွင်တစ်ဦးအဲန်အက်ဖ်-21A ဒုံးပျံ-လုပ်ခဲ့ပြီးအာကာသသင်တန်းဆရာစမ်းသပ်နေချိန်မှာသူဟာကျဉ်းမြောင်းစွာအသေခံလွတ်ရ၏။ သူ vainly ဟာအာဏာမဲ့, လျှင်မြန်စွာကျဆင်းယာဉ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုရဖို့ရန်အပြင်းအထန်ပြီးနောက် 8,500 ခြေရင်းနားမှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှ parachuted ။ ဒီအဖြစ်အပျက်အတွက်သူမြင့်သောအမြင့်ပျံသန်းမှုများအတွက်လိုအပ်သောအပြည့်အဝဖိအားဝတ်စုံအတွက်အရေးပေါ်ထွတ်အောင်ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်မှူးဖြစ်လာသည်။ "
အဆိုပါလေယာဉ်သည်လူအများကပျက်ကျမှုအတွက်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနောက်ပိုင်းတွင်လေယာဉ်ပျက်ကျရသည့်အကြောင်းရင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုနှင့်လေယာဉ်တင်တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်း၏အလွန်အကျွံထောင့်ကနေရလဒ်တစ်ခုလှည့်ဖျားခဲ့တာကြောင့်ပြသခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်မှုများ၏အလွန်အကျွံထောင့်လေယာဉ်မှူး input ကိုအားဖြင့်ပေမယ်ပြီးနောက်ဒုံးပျံ-powered zoom ကိုတောင်တက်အဆင့်များအတွက်ပိတ်ပစ်အဆိုပါ J79 အင်ဂျင် spool အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်မယ့် gyroscope ခွအေနအေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။
အဆိုပါလေယာဉ်ပျက်ကျမှုရုပ်ရှင်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုညာ Stuff ။ " သို့သော်ညွှန်ကြားရေးမှူး / စာရေးဆရာလေယာဉ်ပျက်ကျမှုဝန်းကျင်အချက်အလက်များ / ဖြစ်ရပ်များအများစုပြောင်းလဲသွားတယ်။ သူတို့ရတယ်အကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအရာညာဘက်တစ်ဦးက F-104 ပျက်ကျမှုပြုခဲ့ကြောင်း Yeager မောင်းနှင်သောခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်များတွင် Yeager ကစားခြင်းအဆိုပါတန့်သည်လူပျောက်ပျက်။ သောကြာနေ့တွင်, ဇန်နဝါရီလ 14, 1983, အရိုက်ကူးရေး recommence ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါစီစဉ်ထားခုန် N10,500 အဖြစ်မှတ်ပုံတင်တဲ့ Cessna 206 မှ 29173 ခြေရင်းနားမှာစတင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အော်ပရေတာ, Randy Deluca နှင့် Svec အဖြစ်အပျက်မပါဘဲခုန်ချအဆိုပါကင်မရာ, မီးခိုးမီးစက်လုပ်ကိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ 3,500 ခွကေိုရောက်ရှိသည်အထိဒီတော့တစ်စုံတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှအပေါ်ကျင်းပခဲ့တယ်။
သူတို့ကကွဲကွာဝေးတစ်ဦးချင်းစီကနေခြေရာခံများနှင့် Deluca 2,500 ခြေရင်းနားမှာသည်သူ၏အဓိကလေထီးပါဝငျအတူ-ကျဆုံးခြင်းလွတ်မြောက်မှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ တစ်ဦးပြားနှင့်တည်ငြိမ်အနေအထားကျသွားခဲ့တဲ့ Svec, မိမိအဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျး၏တစ်ခုခုကိုတပ်ဖြန့်ဘူး။ အလိုအလျောက် activation device ကိုမပါဘဲခုန်ပြီးမှ, သူချက်ချင်း 35 နှစ်အရွယ်ဦးသေဆုံးပြီး, သဲကန္တာရကြမ်းပြင်ထိခိုက်။
နှစ်ဦးစလုံး Svec ၏ပင်မနှင့်အရံဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးတစ်ခုစာမေးပွဲတစ်ခုခုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေပြနှင့်မြေပေါ်မှာမျက်မြင်သက်သေများကသူ၏စိတျအပိုငျးအပေါ်ရုန်းကန်သို့မဟုတ်အခက်အခဲ၏လက္ခဏာမကိုမြင်တော်မူ၏။ သူဝတ်ဆင်အဆိုပါဝတ်စုံကိုအပြည့်အဝ-ခေါင်းကိုဦးထုပ်ဝတ်ထား၏ချွင်းချက်နှင့်အတူဘာမျှသာမန်ထဲကခဲ့သည့်အတွက်တစ်ဝှမ်းရွှေ့ဖို့အထူးသဖြင့်မခက်ခဲခဲ့။ ကကျယ်ပြန့်မီးခိုးသူ့ကိုသတိလစ်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းပြန်ဆိုယူဆနေသည်ပေမယ့်အဆုံး၌အဘယ်သူမျှမရှင်းပြချက်, 2,000 ခုန်ကျော်၏ဝါရင့်များ၏ပပျောက်ရေးသေရှာတွေ့ခဲ့သည်။
F-104 ခုနှစ်တွင် Chuck Yeager ရဲ့စမ်းသပ်ပျံသန်းမှု / Crash
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #435 by Colonelwing
Gentelmen နေ့သည်ကောင်းသော ,,,
ဗီယက်နမ်တိုက်လေယာဉ်ရှေ့ပြေး Pow တိုနီမာရှယ်
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတိုနီမာရှယ် (USAF ret ။ ) သည်သူ၏လေယာဉ်ပျံပေါက်ကွဲသည်အထိမြောက်ဗီယက်နမ်ကျော်က F-4 Phantom တိုက်လေယာဉ်-ဗုံးကြဲလေယာဉ်ပျံရှယ်ယာအတှေ့အကွုံ, ဖမ်းမိပြီး Pow အဖြစ်ပေးနေတာကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သည်။
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #438 by Colonelwing
အဆိုပါ Awesome က F-4 Phantom Gentelmen ,, ။
ဒါဟာပညာရေး HD ဗီဒီယိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလေတပ် (USAF) ကအရှေ့တောင်အာရှ 4s-1960s တလျှောက်လုံးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်သည့် F-1970 Phantom လေယာဉ်ပျံအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုဘယ်လိုပြသထားတယ်။ အဆိုပါ Phantom ကျော် Mach 2.2 ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းနှင့်အတူကြီးမားတဲ့လေယာဉ်ပျံသည်။ ဒါဟာကိုးပြင်ပ hardpoints အပေါ် (18,000 ကီလိုဂရမ်) 8,400 ပေါင်ထက် ပို. သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ F-4 လည်းကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်နှင့်ရေတပ်နှင့် USAF နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီးလေကြောင်းစိုးမိုးရေးလေယာဉ်တစ်စင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, မြေ-ထောက်ခံမှုနှင့်ဝေဟင်ကင်းထောက်အခန်းကဏ္ဍအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Phantom ဟာ 20th ရာစုအတွင်း Ace status ကိုမှီဖို့ပျံသန်းပြီးခဲ့သည့်အမေရိကန်ဂျက်ဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူးရှိပါတယ်။ အဆိုပါ McDonnell Douglas F-4 Phantom II ကိုမူလက McDonnell လေယာဉ်အားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဘို့အဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်တွဲဖက် Two-ထိုင်ခုံ, အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်, All-ရာသီဥတု, တာဝေးပစ်အသံထက်မြန်ဂျက်ကြားဖြတ်လေယာဉ်များဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး 1960 အတွက်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းချက်နဲ့နှင့်လယ်ပိုင်း 1960s သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းရန်အတောင်ပံ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်လာခဲ့သော်လည်းခြင်းဖြင့်သက်သေပြခဲ့သည်။
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #439 by Colonelwing
အားလုံးရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ ,, သင်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ပြ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရော်ဘင်အိုး Gentelmen!
အမေရိကန်သူရဲကောင်း - ရော်ဘင်အိုး
ရော်ဘင်အိုး (ဇူလိုင်လ 14, 1922 - ဇွန်လ 14, 2007) ကိုအမေရိကန်လေတပ်အတွက်အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးနှင့်အထွေထွေအရာရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်း 16 အောင်ပွဲတစ်ခုပေါင်းစပ်စုစုပေါင်းအတူတစ်ဦး "သုံးဆ Ace" ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်အဖြစ် 1973 အတွက်အနားယူခဲ့သည်။
သူကအနောက်ပွိုင့်မှာပညာတတ်ကြည်းတပ်လေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ရောဘတ်စနစ်သစ်အသား, နှင့်အမေရိကန်ကြည်းတပ်လေတပ် Corps ၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်တစ်ခုကြီးပြင်း၏ထုတ်ကုန်, အိုးဟာနုပျိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်တိုက်လေယာဉ်ရှေ့ပြေး epitomized ။ သူကမကြာခဏသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလေတပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျန်ရစ်နှင့်ယင်း၏ရှေ့ဆောင်ဂျက်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ခုတိုက်လေယာဉ်အတောင်ပံများ၏ command ကိုမှ Rising, အိုးကိုအကောင်းဆုံးတောင်ပံနှစ်ဦးစလုံးသည်သူ၏ Air-တိုက်ပွဲများကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ၏တပ်မှူး, နှင့်တိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်သူ၏ဂုဏ်သတင်းအဖြစ်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးသမိုင်းပညာရှင်, သူ၏ရွယ်တူချင်းအကြားမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြားရှိဗီယက်နမ်မှပြန်လာသောပြီးနောက်ယေဘုယျ brigadier မှရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်အခြားအဓိက command ကိုကိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ကျန်ရှိသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလေတပ်အကယ်ဒမီမှာဗိုလ်လောင်းများ၏တပ်မှူးချုပ်အဖြစ်နှင့်လေတပ်စစ်ဆေးရေးအထွေထွေရုံးအတွက်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအဖြစ်, Non-လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာထူးအတွက်သုံးစွဲခဲ့သည်။
အဆိုပါကောင်းကင်၏စစ်သူရဲကောင်းများ - ဗီယက်နမ် Dogfights ရော်ဘင်အိုး
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #440 by Colonelwing
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #448 by Colonelwing
အဆိုပါဝက် Gentelmen ... ခံစားကြည့်ပါ!
A-10 Thunderbolt II ကို
မင်္ဂလာ Brrrt နေ့အထူး
Warthog GAU-8 BRRRT Strafing ဂွန်မောင်းသူမဲ့ Humvees ကိုဖွိုဖကျြအလုပ်လုပ်စေပြီး
ကြောက်မက်ဘွယ် GAU-10 strafing သေနတ်ပို့ချ A-8 Warthog Anti-tank လေယာဉ်ရွေ့လျားနေသည့်နှင့်အငြိမ်ပစ်မှတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ဖို့မောင်းသူမဲ့ humvee ယာဉ်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။